सुरु भएन टिकट बुकिङ, मोबाइल नम्बर लिएर यात्रु फर्काउदै व्यवसायी – YesKathmandu.com
काठमाडौँ । दशैका लागि बिहीबारदेखि सुरु हुने भनिएको टिकट बुकिङ अझै सुरु हुन सकेको छैन । आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने भनिए पनि सरकारले व्यवसायीकाे माग सम्बोधन नगरेकाले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छैनन्।
यातायात व्यवसायी र सरकारबीच पटकपटकको वार्तापछि भाद्र २२ गतेदेखि टिकट बुकको काम सुरु गर्ने सहमति भएको थियो तर यातायात व्यावसायीहरुको छतमा सामान राख्न पाउनुपर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्नु पर्ने माग सरकारले पूरा गर्न नसकेकाले अग्रिम टिकट नदिएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
‘उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन संशोधन गर्ने कुरा रातारात हुँदैन। हामीले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन मन्त्रिपरिषदले निर्णय अनुमोदन गरेपछि ऐन संशोधन हुन्छ।’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘व्यवसायीहरु सरकारले सहमति नभई नारायणघाट–मुग्लीन सडकखण्डकाे पहिरोले गाडीहरु समयमा आउनरजान समस्या हुन्छ भनेर टिकट बुकिङ नगरेको हुनुपर्छ।’ अब फेरि व्यवसायीहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि अग्रिम बुकिङको अर्को मिति तय हुने पाण्डेले बताए।
कहिलेदेखि बुकिङ खुल्ने भन्ने कुरो टुंगो नभएकोले व्यवसायीहरुले यात्रुसंग मोबाइल नं लिएर फिर्ता पठाउन थालेका छन्। ‘अग्रिम टिकट खुल्ने कुराको टुङ्गो छैन। नयाँ गाडी पनि यो वर्ष छैनन्। भएका गाडीहरु पनि धेरै बिग्रेका छन्। तपाईहरु सम्पर्क नम्बर लिएर जानुस् र पछि सम्पर्क गर्नुस।’
राती पनि रोकिएन महोत्तरीको उम्मेदवारी मनोनयन
नेताका अस्पताललाई ५० करोड अनुदान
मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन किन ? कमल थापा
मुलुकभरि कति छन् एफएम रेडियो ?
मन्त्री यादव उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाँदै